doon, dabaasha iyo biyaha sports | Holmbygden.se
In meelo dhowr ah agagaarka Holmsjön yihiin dhowr xeebaha bacaadka wanaagsan sommarbad wacan. The ugu soo booqday waa Västbyn iyo Sandnäset.
At Sandnäset waxaa kale oo suuragal ah in la kiraysto barafka jet, iyo noocyo kala duwan oo hawlaha kale.
Waayo, kuwa jeclaan doon waa u gudubno ugu weyn ee meesha Holmsjön ee, dheer oo ku saabsan saddex mil iyo 39 km² i deegaanka. gudubno, waxaa sidoo kale ku habboonayn markooda ballaaran ee barafka biyaha ama wakeboarding. Dad badan oo degaan iyo marti aqalada xagaaga ay doortaan in ay bilaabi doomo ay xagaagan.
biyaha degmada ee Holm Fiiri map kalluunka iyo akhriyo badan oo ku saabsan kalluumaysiga Holms halkan.
In niyadda ah masaafo leisurely in huuri a (Canadian) kasta oo webiyaasha. Markaas waxaa jira harooyinka in la kiraysto ee Österström. heerka View iyo macluumaadka xiriirka.
Holmsjön la deriska ah gudubno Leringen noqonaya kaydka biyaha wayn warshadaha xoogga iyo nidaam geedka awood Leringsforsens (sawir of socodka biyaha ee .pdf halkan).
Xagaaga waa heerka biyaha badda Holm oo ku saabsan 201 mitir heerka badda iyo hoos hoos jiilaalka oo ku saabsan 197 m.ö.h.
Arag heerarka biyaha ee maanta halkan.
source: Shirkadaha gacanta Biyaha.
Sida harooyinka oo dhan waa wax sababo muhiim u noqon kara in la ogaado baxay hirarka ama barafka. Hoos waxaad ka arki kartaa map a of Holmsjön iyo aasaaskeeda, iyo download maps tareenka si ay u isticmaalaan in aad GPS, eller navigationsutrustning smartphone.
(Ma aan arki map hoose, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u Midig riix on a strip top / hoose hurdiga ah ee aad browser dooro “Show hor istaagay content” ama “U ogolow”.)
waa shaxda badda ee shaashadda buuxda ama u furan map in Khariidadaha Google (pages badan).
Gooldhalinta ee mobile la booskaaga
Raac goobta GPS iyo arko muujinayaa sababtoo ah telefoonka isticmaalaya Khariidadaha Google.
1. Daar GPS:en i smartphone din-baabuur (iphone / Android).
2. Ku qor cinwaanka kor ku xusan in aad browser mobile.
3. Haddii ay soo sanduuq “tallaabo Buuxi isticmaalaya”, Xaaladdan oo kale, “Khariidadaha”.
Haddaba waad arki kartaa Holm Lake saleysan, aritani iyo meel on telefoonada gacanta.
Download files track ee qaabab kala duwan ee GPS:waa. Click Sare, “Save Target Sida…”.
sarrifka GPS – Holmsjons_grund_(120912).gpx (0,7MB)
Google Earth – Holmsjons_grund_(via_internet).KML (0,1MB) Akhrinta map-ka online.
More on map-ka, iyo maps track ah
Holm Lake salaysan yahay track GPS a (s.k. “track”) in sifaha sababo kala duwan u gudubno, iyo inay aritani. track The isku dari kartaa la GPS ama smartphone phone isticmaalo xagaaga si looga fogaado sababta oo ah doon iyo jiilaalka si looga fogaado dhagaxyada ama baraf khafiif ah. Ka fogow khadadka iyo safar uu noqon doono ammaan! sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa halka kalluumaysiga haddii aad rabto in aad mar kale ka heli aasaas ah oo ku saabsan gudubno,.
Holmsjön waxaa nidaaminaya iyo hoos u biyo fara badan ee xilliga qaboobaha. track kart ayaa la sameeyey by barafka weheliyaan u gudubno, ee xeebaha xilliga qaboobaha. Wakhtigan (mars 2008) gudubno, waxaa hoos ku saabsan 4 m marka la barbar dhigo xagaaga biyaha. Dalku wuxuu leeyahay margin wanaagsan haddii u dhex maraan wadada si looga fogaado, maxaa yeelay,. Qaar ka mid ah aasaaska u fiican dabcan noqon kartaa on buuxda oo qoto dheer ku filan weli markii u gudubno, waa iftiin buuxa.
track waxaa abuuray by Patrik Wikholm. processing track Digital iyo daabacaadda ee Niklas Wikholm. Subject in qaladaad.
Back to Dalxiiska / wakhtiyada firaaqada ah